PUNSAA oo Garowe ku qabatay kulan looga arinsanayo Tayeynta Bangiga Puntland (CODAD +SAWIRRO). • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / PUNSAA oo Garowe ku qabatay kulan looga arinsanayo Tayeynta Bangiga Puntland (CODAD +SAWIRRO).
PUNSAA oo Garowe ku qabatay kulan looga arinsanayo Tayeynta Bangiga Puntland (CODAD +SAWIRRO).
July 11, 2018 - By: Mohamed Dahir
Garowe(HM):- Hay’adda daneeyayaasha aaan dowliga ahayn ee Puntland (PUNSAA) ayaa Garowe ku qabatay kulan looga arinsanayo sidii loo tayeyn lahaa Bangiyadda Dowladda Puntland,waxaana kazoo qaybgalay Gudoomiye kuxigeenka Bangiga ,Shaqaalaha,Aqoonyahano & Bulshada rayidka ah ee Puntland.
kulanka oo labo maalmood socday waxaa looga dooday habka loo horumarin karo bangiga,waxaana kaqaybgalayashu soo jeediyeen talooyin iyo tusaalayaal ku adan tayeynta bangiga iyo sidii loo isticmaali lahaa qaybaha bangiyadda Puntland.
Gudoomiye kuxigeenka PUNSAA Mustafe Cabdilahi ayaa sheegay in kulankani ka duwanyahay kulamadii kale madaama looga dooday sidii loo kobcin lahaa bangiga ,waxaana uu usoo jeediyey madaxda iyo shaqaalaha in ay qataan talooyinkan kuna dabakhaan howlaha uu bank u hayo bulshadda Puntland.
Gudoomiye kuxigeenka Bankiga Puntland Maxamed Siciid Hogaamo-laroor ayaa soo afmeeray kulanka labada cisho socday waxaana uu kaqaybgalayaasha uga mahadceliyey sidii ay waqtiga u galiyeen dooda ku adan tayeynta Bangiga.
Gudoomiyuhu waxaa uu balanqaaday in ay sii laba jibaaridonaan adeegyadda iyo casriyeynta howlaha Bangigu dadweynaha Puntland u hayo,waxaana uu bulshada usoo jeediyey in ay sii wadaan dadaalada noocaani oo kale ah ee ay isugu keenayaan hay’adaha dowladda & shacabka ee ay isku waydaarsanayaan xoga & isla xisaabtanka.
Halkaan ka dhagayso Codadka xiritaanka Kulanka.